मरिचले निको पार्छ क्यान्सर
जाडो याममा चियामा मरिच राखेर खाने चलन छ । प्रायः जाडो समयमा चियामा राखिने कालो मरिचले न्यानो गराउन मात्र होइन, स्वास्थ्यलाई फाइदा गर्दछ । यी हुन् मरिचका फाइदा मरिचको सेवनले पेटको दुखाई कम गर्न मद्दत गर्छ । मरिचमा हुने एन्टीब्याक्टेरियल गुणले पेटमा हुने इन्फेक्सनबाट बचाउँछ । मरिचको नियमित सेवनले शरीरको मोटोपना नियन्त्रण गरी तौल कम गर्न मद्दत गर्छ । त्यस्तै,[Read More…]
by GreenKhabar —	October 21, 2016 —	0 comments —	स्वास्थ्य, हरित खबर
यस्ता छन् कागतीका अवगुण
भोजनमा कागतीको उपस्थिती निकै मन पराइन्छ र निकै स्वास्थ्यवर्दक पनि मानिन्छ । एण्टी क्यालोरी फुडका रुपमा चिनिने यो फलले तपाईं हाम्रो शारिरिक चुस्तता कायम राख्न निकै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । तर हरेक कुराको सकरात्मकका साथै नकरात्मक पक्ष पनि हुन्छ भनेझैं कागतिका पनि केही अवगुण छन् ।स्वास्थ्यका लागि निकै लाभदायक मानिने कागतीको उपभोग गर्न नजान्दा यसले रोग पनि निम्त्याउन सक्छ ।[Read More…]
हिन्दूहरुको धार्मिक आस्थाका रुपमा रहेको रुद्राक्षले अलौकिक शक्ति प्रदान गर्नुका साथै आयुर्वेदिक औषधिमा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने थाहा पाएपछि यसको माग बढ्दै जान थालेको छ । धार्मिक अवसरमा रुद्राक्षको माला धारण गर्ने, जपतप आदि गर्दा पनि रुद्राक्षको धारण गर्ने प्रचलन रहेको छ तर, औषधिका रुपमा पनि यसको प्रयोग हुन्छ भन्ने विषयमा अधिकांश मानिस अनभिज्ञ छन् । रुद्राक्ष धारण गरे[Read More…]
by GreenKhabar —	October 18, 2016 —	0 comments —	मूलपेज, हरित उद्यम, हरित खबर
भोजपुरका एक युवाले २ बोटको रूद्राक्ष ५५ लाखमा बेचे !
भोजपुर । बोटमा फलेको रुद्राक्ष ५५ लाखमा बिक्यो भन्दा आर्चश्य लाग्छ । धेरैले वाइयात कुरा भनेर पत्याउँदैनन् । तर कुलुङ–२ भोजपुरका आशमान राईले दुई महिनाअघि बगानमा भएको रुद्राक्षको बोटको दुई वर्षको उत्पादन ५५ लाख रुपैयाँमा बेचेका छन् । दुई बर्ष अघि सोही बोटमा फलेका रुद्राक्ष आशमानले तीन लाख ५० हजारमा बेचका थिए । उनले यसवर्ष पनि २०७३ र ७४ सालको[Read More…]
खोटाङ जिल्लाको पर्यटकीयस्थल मझुवागढी जानका लागि फलामे रेलिङसहितको पदमार्ग निर्माण गरिएको छ । गढी आवतजावत गर्ने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई लक्षित गरेर दिक्तेलस्थित हाटडाँडादेखि भगवतीपार्कसम्म फलामे रेलिङसहितको पदमार्ग निर्माण गरिएको हो । जिल्ला विकास समितिमार्फत सञ्चालित एसबिएलएल परियोजनाको आर्थिक तथा जिल्ला प्राविधिक कार्यालय खोटाङको प्राविधिक सहयोगमा पदमार्ग निर्माण गरिएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष भूपराज राईले बताउनुभयो । अध्यक्ष राईका अनुसार हाटडाँडादेखि[Read More…]
by GreenKhabar —	October 17, 2016 —	0 comments —	फिचर, हरित खबर
एउटै रुखबाट ६१ लाख टिपेपछि काभ्रेलीहरु दिनरात रुख कुर्दै !
रुख कुर्नेमा को–को परे ? हरिशरण न्यौपाने, । कसैले पैसा मागेमा के मेरो घरमा (बारीमा) पैसाको बोट छ र ! भन्दै झर्किने गरेका नेपालीहरु अब एउटै बोटबाट लाखौं टिप्न थालेका छन् । नेपालबाट बिदेशी भूमिमा गएर पैसा पठाउनेहरुलाई पनि नेपालमा बस्नेहरु बिदेशमा बोटमै टपाटप पैसा टिपेर पठाउने गरेको जस्तो सम्झिन्छन् । घरपरिवार इष्टमित्र सबैले त्यस्तै सोच्छन् । तर विचरा ति[Read More…]
by GreenKhabar —	October 7, 2016 —	0 comments —	मूलपेज, हरित खबर
लक्ष्मीप्रसाद सापकोटा पर्वत, १८ असोज । झन्डै एक दशकदेखि अलपत्र बनेको पर्वतको एक विकट गाउँमा करोडौं रुपैयाँको लगानीमा बनेको वायु ऊर्जा सञ्चालन गर्न स्थानीयले माग गरेका छन् । पर्वत जिल्लाको फलामखानी गाविसमा सञ्चालित हावाबाट बिजुली निकाल्ने प्रविधि मर्मत सम्भारको अभावमा अलपत्र बनेको हो । डेढ दशकअघि स्थापना भई सञ्चालनमा आएको उक्त वायुऊर्जा उपकरण समय समयमा मर्मत सम्भारको अभावमा गुज्रिएको छ[Read More…]
by GreenKhabar —	October 4, 2016 —	0 comments —	मूलपेज, हरित खबर